Kulamo ka dhan ah Madaxweynaha Puntland oo ka socda Gobolka Sanaag.
By Caalamka On Nov 9, 2019
Kulamo looga soo horjeedo Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi deni ayaa ka socda degmooyin ka tirsan Gobolka Sanaag, kulamadaan ayaa ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo.
Waxgaradka iyo Siyaasiyiinta beelaha qaar ayaa waxa ay sheegeen in aysan ka mid ahaan doonin maamulka Puntland, maadaama Gudoomiyihii baarlamaanka Puntland oo matalaad ahaan kasoo jeeday gobolka Sanaag si xoog ah xilka looga qaaday.
Qaar ka mid ah beelaha dega Gobolka Sanaag ayaa Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaaho Deni ku eedeeyay in weerar ku qaaday Xarunta Baarlamaanka Maamulka Puntland isla markaana ay waxyeelo ka dhalatay sida ay sheegeen.
Gudoomiyihii xilka laga qaaday ee Baarlamaanka Maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo ayaa dib ugu laabtay gobolka Sanaag, islamarkaana kulamada kala duwan la leh bulshadda gobolka Sanaag.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Wasiiro ka tirsan Maamulka Puntland oo taageersan Madaxweynaha Maamulkaasi ay dhankooda isku dayayaan in ay qanciyaan Tabashada beelaha qaar oo ka dhalatay Xilka qaadista Gudoomiyaha Baarlamaanka.
RW Khayre Oo Caawa kasoo Laabtay Safar Uu kusoo Maray Sadax Dal
“Hadii Somaliland ku kala Tagayso Ha ku kala Tagto”Boqor Buur-madaw
Banaanbaxyo ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag oo looga soo horjeeday Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ay sheegeen dadka degaanka in uu abaabulay qorshihii xilka looga tuuray Gudoomiye Dhoobo.
Golaha wakiilada Maamulka Puntland ayaa Khamiistii Xilka ka qaaday Gudoomiyihii Baarlamaanka Maamulkaasi Dhoobo-daareed, ka dib markii Khilaaf xoogan soo kala dhexgalay asaga iyo Madaxweyne Deni.